Qaab cusub oo lagu baarayo da’da magangalyo doonka | Somaliska
Gudi ay u xilsaartay dowlada Sweden in ay soo bandhigaan qaabkii loo baari lahaa da'da dadka isku dhiiba caruurta ayaa soo gabagabeeyay hawshoodii. Iyagoo hada soo bandhigay nidaam cusub oo lagu ogaan karo da'da dhabta ah ee dadka da'da yar isku dhiiba. Gudiga ayaa soo bandhigay qorshe ka kooban dhowr qodob oo ay ugu horeyso in raajo gacmaha ah iyo baaritaan ilkaha ah lagu sameeyo magangalyo doonka. Waxaa intaas sii dheer in wareysi lala yeesho iyadoo arinta inta badan ay sameynayaan dhaqaatiirta. Gudiga ayaa sidoo kale ku baaqay in arintaan si taxadar leh loo isticmaalo maadaama ay jiri karto qalad gaaraya 1 sano ilaa 4 sano oo ay sheegi karto raajada. Qaladkaas ayaa noqon kara mid qofka da'diisa u muujinaya in ka badan inta uu jiro ama in ka yar. Sidaa darteed ayay gudigu ku taliyeen in wareysi la socdo baaritaanka. Nidaamka ay hada Sweden ku baadho da'da ayaa ah mid la abuuray 1993 kaasoo ka dambeeya casriga hada jira. Wasiirka Socdaalka Sweden Tobias Billström ayaa horay u dalbaday in la abuuro sharci quseeya arintaan, isla markaana la raaco qaabka ay wadamada Dariska ah ee Norway iyo Denmark wax u baaraan. Qorshahaan ay soo bandhigeen gudiga oo hada soo jeedin keliya ah balse aan wali la dhaqan galin ayaa noqon doona mid adkeyn kara xaalada magangalyada dadka caruurta isku dhiibta oo Laanta Socdaalku ay ku tilmaantay kuwo da'dooda dhabta ah "shaki" ku jiro.
Gudi ay u xilsaartay dowlada Sweden in ay soo bandhigaan qaabkii loo baari lahaa da’da dadka isku dhiiba caruurta ayaa soo gabagabeeyay hawshoodii. Iyagoo hada soo bandhigay nidaam cusub oo lagu ogaan karo da’da dhabta ah ee dadka da’da yar isku dhiiba.
Gudiga ayaa soo bandhigay qorshe ka kooban dhowr qodob oo ay ugu horeyso in raajo gacmaha ah iyo baaritaan ilkaha ah lagu sameeyo magangalyo doonka. Waxaa intaas sii dheer in wareysi lala yeesho iyadoo arinta inta badan ay sameynayaan dhaqaatiirta.
Gudiga ayaa sidoo kale ku baaqay in arintaan si taxadar leh loo isticmaalo maadaama ay jiri karto qalad gaaraya 1 sano ilaa 4 sano oo ay sheegi karto raajada. Qaladkaas ayaa noqon kara mid qofka da’diisa u muujinaya in ka badan inta uu jiro ama in ka yar. Sidaa darteed ayay gudigu ku taliyeen in wareysi la socdo baaritaanka.
Nidaamka ay hada Sweden ku baadho da’da ayaa ah mid la abuuray 1993 kaasoo ka dambeeya casriga hada jira. Wasiirka Socdaalka Sweden Tobias Billström ayaa horay u dalbaday in la abuuro sharci quseeya arintaan, isla markaana la raaco qaabka ay wadamada Dariska ah ee Norway iyo Denmark wax u baaraan.
Qorshahaan ay soo bandhigeen gudiga oo hada soo jeedin keliya ah balse aan wali la dhaqan galin ayaa noqon doona mid adkeyn kara xaalada magangalyada dadka caruurta isku dhiibta oo Laanta Socdaalku ay ku tilmaantay kuwo da’dooda dhabta ah “shaki” ku jiro.
Safarkaygii Islaamka: Heesaaga caanka ah ee Yusuf Islam
jimcale wan ku salamay walal arintan wa arin aan fiicnen marka walal side lobaraya macnaha qofki 18.kayar swedan maqadaneso miya arinta mase wixi 18. kaweyn oo la ogado fursad kale ayey helayan jabaw mahad sanid
wan idin salamay dhaman waxan raba inan ogado arintan baritanka ma waxey quseysa dadka swedan joga o da.da yar shegta si dad koda ey ugu damwodan mase dadka afriki joga oo walidkod ugu dacwonaya carurnimo jwb mahad sanidiin
Arintaan waa soodhawey nayaa waayo waxaa jira niman waweyn o inta garka iskaxiiran dhahaayo caruur ayan ahay aniga ayaa indhaheyga ku arkay waana nibcahay waana aqli xumo e iskadaaya allaah wuxuu idiin qoray waayimaysaane ordoo siyaabo kale wax uraadsada hadii kale ceeb ayad kadhax laysiin acs
Anniga waxay ila tahay in dadka isku dhiiba da’da yar ay ayaguba ku dhib qabaan balse ay uga dhegan tahay iney sharci deg deg ah helaan iyadoona lala mideeynayo qoyskooda si ka dhaqso badan dadka kale. Laakin waxay ila tahay haddii wax badan ay ka jaraan da’dooda ay dhibaato kala kulmi doonaan marka ay xanuunsadaan oo kale oo la siiyo daawo aan da’dooda u qalmin ileyn waxaa daawada lagu qiimeeyaa qofka da’da uu jiro, bal qiyaas dhibaatada ka dhalan karta taas keliya.
waan idin salamay dhaman inta ku xiran webka iyo maamuka to cares walal arintaan lagu barayo lafaha qofka waa dhaqan gashay waxan shalay arkay dad u dacawonayay caruurtoda oo addis ababa joga ayaa waxa loso diray warqad lagu yiri waxan rabana in aan ka qadno ilmahaga baritanka lafaha ah marka arintan waxay samanaysa qofkasta oo sharci wadankan ka codsada
Toloow arintaan say ku soco doontaa ayadoon og nahay qof 16 jir lagu keenay wadanka misna 4 xaas iyo 10 caruur ah kasoo tagtay inaw jiro sidoo kale gabdhaha somaliyed ee kunool Sveirge maba dhaafaan 20 si kasta ay u weeyn yihiin halka uk-na 18 ay mudada kaam dambeeysttaa u tahay ood u qabto in 20 hadeey gaaraan laganaaxaa ama aake 47 loogu heeysto rabtaaas
June 29, 2012 at 21:36
sareedo adiga wax walba masoo dhaweenee yaab kkk
Sveirge,wey sojesatay ee runta halaga hadlo ayada wax walbo kudhante wixi,RABI,SW/,kuqorayna ayadat kuhelidonta wa,iga dar,daran
Faadumo wax kasta o macquula waa soodhaweyne
horta waa arin dhib badan ku keeni karta bulsha waynta somalida swedan kunol saredo se somalida hada timaada qurbaa odhan ayaaba ka siman dada yar ee ay isku dhibayan se dan bay modeen takale waano iyo tusaale ku dar maraad qofka wax udiidayso dhib u keeni kara wcs
asc dhamaan hadaan u gudo galo waxa somali ka daran oo uukadabkood galey cidii afgaaani aheyd oo waxaan 15 aheyn isku dhiibin
Kkkk caadi iskadhig yarka doobkaa anaa kuqaraaba kiilahe secamal